Tsidiho ny Florida Keys? Ankafizo ny "Quarantine" miaraka amina taratasy fidiovana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsidiho ny Florida Keys? Ankafizo ny "Quarantine" miaraka amina taratasy fidiovana
Ny Florida Keys dia nakatona ho an'ny fizahantany tamin'ny 22 martsa tamin'ny 6 hariva ary nikatona nandritra ny 72 andro, ary avy eo nisokatra tamin'ny 1 Jona.
Ny mponina eo an-toerana toa an'i Stacey Mitchell, talen'ny fizahan-tany ho an'ny Florida Keys, dia afaka nankafy ny fiainany sy ny toeram-pambolena foto-kevitra, fantatra koa amin'ny hoe lakozia avy any amin'ny dock-to-dish. Nanohy nankafy ny hazandrano vaovao indrindra eran-tany, voankazo hafahafa, ary makamba goavambe ny mponina.
Mampalahelo fa mandritra izany fotoana izany, ny toekarena dia lasa 100 ka hatramin'ny zero isan-jato, naneho ny fiankinan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny toekaren'ny Keys.
Taorian'ny fisokafana dia nanohy traikefa hafakely tropika ny Keys nefa tsy nandao an'i Etazonia na Florida, saingy tsy vonona ny hahatongavan'ireo sidina. Nanomboka niditra ny mpizahatany avy any amin'ny Florida atsimo indrindra, saingy rehefa nitondra fiara 4 ora dia nifidy ny hijanona ao amin'ny iray amin'ireo hotely sy trano fandraisam-bahiny kely marobe izy ireo.
Nasehony ihany koa fa ny mpandehandeha LGBTQ dia manana fihetseham-po mahery vaika amin'ny Key West izay fantatra fa an'ny mpandeha maharitra indrindra. Marina izany taorian'ny 9/11 ary toa marina ankehitriny. Stacey Mitchell nilaza eTurboNews, "Efa marina izany talohan'ny Tennessee Williams '90 taona lasa izay. Tsy mahagaga raha fantatra amin'ny anarana hoe “Old Man's Guest House” ny trano nosy malaza, satria manao orinasa matanjaka.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny eTurboNews, Nanazava ny fampielezan-kevitr'izy ireo momba ny fanetren-tena i Stacey, toerana iray ahafahanao tsy miraharaha ilay areti-mandringana amin'ny alàlan'ny fanalavirana ara-tsosialy voajanahary, ary fomba fanokafana malefaka tsy manam-paharoa ahafahana mahazo jono, sy fotoana mangina any ambanivohitra. "Nanohana be ny tsenan'ny fidinanay," hoy i Stacey nanampy.
Androany Monroe County (ny lakile), dia tranga 611 hatreto (hatramin'ny 39), ary 6 no maty, ary 7,983 ny fitsapana nomena. Telo andro lasa izay, rehefa natao ity tafatafa ity, 472 monja ny aretina naroson'ny distrika.
Maska tarehy no takiana miaraka amin'ny fanalavirana fiaraha-monina sy ny fanasana tanana. Ny takelaka takelaka amin'ny arabe tokana mankany Keys dia mampatsiahy ireo mpandeha ireo fepetra takiana ireo.
Misokatra hatrany ny trano fisakafoanana amin'ny fisakafoanana any ivelany, ary ny mpitsidika dia tokony hanandrana zava-pisotro antsoina hoe Quarantine. Izy io dia miaraka amin'ny fanampiana fanampiny, izay horonan-taratasy fidiovana. Misimisy kokoa momba an'i Florida Keys eto: www.jci-keys.com
Henoy ny tafatafa:
Fahefana fizahan-tany any Hawaii momba ny fiarovana ny Quarantine tsy maintsy atao
Ny seranam-piaramanidina Brisbane dia manoka ny lalam-pirenena faharoa